टोकियोमा यति धेरै जनसंख्याको व्यवस्थापन कसरी भैरहेको छ ? | Nepali In Japan
टोकियोमा यति धेरै जनसंख्याको व्यवस्थापन कसरी भैरहेको छ ?
March 5, 2019 June 30, 2021
टोकियो जापानको ठूलो शहर हो जहाँ १ करोड ३० लाख भन्दा बढी मानिसको बसोबास छ । यो कल्पना गर्नका लागि मात्रै पनि ठूलो संख्या हो । त्यसैले पनि टोकियोको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको क्षेत्रमा धेरै भीड लाग्छ । सिबुयाको लोकप्रिय स्क्रयाम्बमा प्रति मिनेट हजारौंले वारपार गरेको पाइन्छ भने डिपार्टमेण्ट स्टोर र सप्ताहन्तमा यहाँका बस र टे«नमा खुट्टा टेक्ने ठाउँसमेत हुँदैन भन्दा अत्युक्ति नहोला । अझ चाडपर्वको समयमा त भीडभाड झन् बढ्छ । यति हुँदा हँदै पनि टोकियो विश्वका सबैभन्दा सुरक्षित शहरमध्येको एक हो भने यहाँ सार्वजनिक यातायातको समयनिष्ठता, सबैका लागि धेरै रेष्टुराँ, होटल र अपार्टमेण्टको व्यवस्थाले यसलाई बस्नका लागि थप आकर्षक शहर बनाउँछ । टोकियोले यी सबै मानिसको व्यवस्थापन कसरी गर्छ त?
१. जनसङ्ख्या धेरै तर क्षेत्रफल पनि ठूलो
विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको शहरमध्येको एक भएपनि टोकियोको जनघनत्व भने त्यति ठूलो छैन । यसको अर्थ के हो भने यहाँ प्रति व्यक्तिको लागि ठाउँ प्रश्स्त छ । टोकियोको क्षेत्रफल २ हजार १ सय १८ वर्गा किलोमिटर छ । यसको अर्थ यसको जनसङ्ख्याको जनघनत्व ६ जार १ सय ५८ मानिस प्रति वर्ग किलोमिटर हो । यो पक्कै पनि ठूलो भएपनि यो अन्य शहरको तुलनामा भने त्यति ठूलो होइन । भारतको मुम्बइको जनसङ्ख्या घनत्व २८ हजार ५ सय ८ रहेको छ । टोकियोमा यहाँ बस्ने मानिसका लागि प्रशस्त स्थान छ ।
२.सार्वजनिक यातायात निरन्तर र समयनिष्ठ छन्
काम गर्ने समयमा हजारौं मानिसहरु टोकियो स्टेशन, सिन्जुकु र सिबुयाजस्ता व्यावसायिक क्षेत्रमा घुँइचो लाग्छ । यहाँ ट्रेन र बसमा आफ्नो कार्यालय जान हतारमा रहेका मानिसको भिँड देख्न सकिन्छ । तर यहाँका यातायातका साधन एकदमै समयनिष्ठ छन् र यो समयमै आउने र सकेसम्म समयमै जाने गर्छन् । सेण्ट्रल टोकियोमा हरेक दुई देखि चार मिनेटमा रेल आउँछ ।
३. टोकियोबासीहरु भडसँग अभ्यस्त भइसके
ट्रेनमा जति सुकै भीडभाड देखिए पनि त्यसमा चढ्ने मानिसको भने कहिल्यै खाँचो हुँदैन । त्यहाँका बासीहरु यस्तो भीडका लागि अभ्यस्त भइसके ।
४. भवनहरु अग्ला हुन्छन् तर चौडा हुँदैनन्
केही अपवादहरु भएपनि जापानका भवनहरु अग्ला त हुन्छन् तर ती साँघरा हुन्छन्, चौडा हुँदैनन् । यहाँ थोरै स्थानलाई सक्दो प्रयोगमा ल्याइएको हुन्छ । जापानमा केही वर्ग मिटर तल १० तल्ला भन्दा बढी अग्ला डिपार्टमेण्ट स्टोर वा क्याफे हुनु सामान्य कुरा हो । यस्ता भवनहरुले प्रयोग गर्न सक्ने थोरै भन्दा थोरै जमिनको उपयोग गरेका हुन्छन् ।
५.अपार्टमेण्ट र होटलहरु साना हुन्छन्
जापानमा जमिनको भाउ महंगो भएका कारण यहाँका अपार्टमेण्ट र होटलहरु पनि तपाइले प्रयोग गरिरहेको भन्दा साना हुन सक्छन् । ठाउँ बचाउन घरहरु पनि एकदमै नजिक नजिक बनाइएका हुन्छन् । व्यावसायिक होटलमा एउटा सानो कोठा र सानै बाथरुम उपलब्ध हुन्छ । र जापानमा एक कोठे अपार्टमेण्ट हुनु पनि साधारण कुरा नै हो । थोरै ठाउँको प्रयोग गरेर यहाँ धेरै कोठा बनाइएका हुन्छन् ।
६.छिमेकी प्रिफेक्चरमा धेरै मानिसको बसोबास
टोकियोमा दैनिक हजारौं मानिसको आवतजावत देखिएपनि वास्तवमा तीमध्ये अधिकांश त टोकियोमा बस्दैनन् पनि । अधिकांश मानिसहरु कानागावा, साइतामा र चिबा लगायतका छिमेकी प्रिफेक्चरमा बस्छन् र काम गर्नका लागि मात्र टोकियोका मुख्य क्षेत्रहरुमा आउँदछन् ।
टोकियो अति भीडभाडयुक्त र व्यस्त शहर भएपनि यो बस्नका लागि अति नै उत्कृष्ट पनि छ । जापानीहरु आफ्नो जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन गर्न पनि उत्तिकै पोख्त छन् ।
(जेपिएनइन्फोमा प्रकाशित सामाग्रीको अनुवादित अंश)
Nextजापानी भाषा सिक्दा हुने तीन ठूला गल्ती